ပစ္စည်းခိုးမှုနဲ့ ထောင်ကျသွားတဲ့ ဂျိုကာ တစ်ယောက် ၊ ထောင်ထဲမှာ မြင့်မြတ်နဲ့တွေ့လာ ပြီး ဆရာတင်ခဲ့တယ်. . . .။ ထောင်ထဲကထွက်လာတော့ ဆရာနဲ့ ပေါင်းပြီး လူတွေကိုဘယ်လိုတွေ ဟောက်စားလုပ်ကြလဲဆိုတာ ???
မြင့်မြတ် ၊ ကျော်ကျော်ဗို ၊ အိချောပို ၊ ခင်လှိုင် ၊ ဂျိုကာ ၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ